Global Voices teny Malagasy » Politisianina nanasa mpakasary handrakitra azy hividy fiara. Azo sary ihany koa ny famantaranandrony lafovidy noho ilay fiara hovidiany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Janoary 2016 8:28 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Politika, Akon'ny RuNet
Fampitaha famantaranandro an-tanana lafo vidy. Marine Chronograph an'i Vitaly Milonov (ankavia) vs. Richard Mille an'i Dmitry Peskov . Sary namboarin'i Kevin Rothrock.
Raha niaraka tamin'ny ekipa mpiara-miasan'ny televiziona anankiray ny mpanolotsainan'ny tanàna ao St. Petersburg antsoina hoe Vitaly Milonov haka azy an-dahatsary mividy fiara vita rosiana iray, dia tsy nihevitra izy fa ny famataranandrony an-tanana indray no ho lasa resaka. Ary dia izay indrindra anefa no nitranga, satria voalohany indrindra dia tahaka ny Maxi Marine Chronograph (mitentina anelanelan'ny $8,500  ka hatramin'ny $12,000 , miankina amin'ilay maodeliny indrindra) ilay fitaovana fijerena ora. Mandritra izany fotoana izany, ny fiara novidian'i Milonov—Lada Vesta iray—dia mitentina $9000 (658.000 robla) monja. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny famantaranandrony indray no mety ho lafovidy kokoa noho ny fiarany vaovao, ny fividianana izany fiara izany naseho  vahoaka ho karazana fihetsika fitiavan-tanindrazana ho fanohanana an'i Rosia amin'ny tolona ara-toekarena atrehiny.
Naloan'i Milonov ny atsasa-bidy hividianana ilay fiara ary nanaiky izy ny handoa ny ambiny isam-bolana mandritra ny telo taona hahamarina ny mizanam-pifanakalozana (hamenoana ny banga). Araka ny nolazain'ny masoivohom-baovao LifeNews , dia nahazo eo ho eo amin'ny 3.5 tapitrisa robla eo ho ao i Milonov ($48.000, raha amin'ny sandam-pifanakalozana androany) tamin'ny taona 2014. Ao anatin'ny fananany ahitana sombin-tany kely, tranobe iray manana velarana 1.115 metatra toradroa, sy fananana iray hafa mbola eo ampananganana.
Dmitry Sukharev, mpikambana iray ao amin'ny Fikambanana mpanao asa soa miady amin'ny kolikoly (vondrona mpandala ny mangarahara), no iray amin'ireo nanintona ny fifantohana tamin'ny famataranandron'i Milonov, nisioka tamin'ny 30 Desambra fa mihoatra ny iray tapitrisa robla amin'izao fotoana izao ny vidin'io fitaovana fijerena ora io noho ny fitotongan'ny sandam-bola rosiana. Namaly  avy eo ny kaonty Twitter tsy misolotena amin'ny fomba ofisialy an'i Milonov, nitsipaka ny vaovao ary nilaza an'i Sukharev ho “mpivarotra lainga.”
— Дмитрий Сухарев (@D_Suharev) December 30, 2015 
Ooh. Nividy famataranandro tsy dia nisy vidiny i Milonov. Noho ny fitotongan'ny robla dia lasa mihoatra ny iray tapitrisa robla ankehitriny ny vidin'ilay famataranandro.
Tsy sambany akory ny olona no nahamarika ny famantaranandro lafovidin'i Milonov. Tamin'ny Janoary 2013 i Danill Gumin no nanontany tena  tao amin'ny Twitter raha nahazo Patek Philippe (izay amidy antsinjarany  hatramin'ny $990,000) iray i Milonov. Tamin'ny 3 Avrily 2015 indray i Andrey Zakharov namoaka pikantsary  avy amin'ny lahatsary YouTube, nampiseho an'i Milonov mitondra Maxi Marine Chronograph izay heverina ihany koa ho nanaovany raha nividy fiara Lada Vesta izy tamin'ity herinandro ity.
Anisan'ny fitafiana nanaovan'i Milonov tany amin'ny fividianana fiara ny palitao iray manasongadina ny antsoina hoe vokovokon'i Baklanovsky (ny iray eo anoloana ary ny iray ao an-damosina). Hitao ao amin'ny marika ny fehezanteny farany amin'ny Fanekem-pinoana Niseana-Konstantinopolitana : “Mino ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty aho, Ary ny Fiainan-koavy mandrakizay. Amena.” Miaraka amin'ny fehezanteny ao anatin'ny akanjo ambonin'i Milonov ahitana karandoha sy vokovokon-taolandava—fanakambanana nataon'ny Jeneraly rosiana Yakov Baklanov tao amin'ny rezimanta Kôsaka tamin'ny 1850 nalaza . Amin'izao fotoana izao ny sary dia mampahatsiahy ireo vondrom-piarahamonina Rosiana Ôrthôdôksa sasantsasany, ary ahitana azy amin'ny fitafy mirentirety  tahaka ny t-shirts sy ny satroka.
Tsy mitsaha-mamoaka ny porofom-pomba fiainana be rendrarendran'ireo avo ara-politika ny Fikambanana mpanao asa-soa miady amin'ny kolikoly. Tamin'ny Aogositra 2015, nahazo ny lohatenim-baovao iraisampirenena ny vondrona rehefa nandranty ny famataranandron’ i Dmitry Peskov, mpitondratenin'i Vladimir Putin, famantaranandro fanao an-tanana izay tombanana ho $625.000 farafaha-ambaniny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/02/77904/
 December 30, 2015: https://twitter.com/D_Suharev/status/682275656676290560
 no nanontany tena: https://twitter.com/daniilgumin/status/292312917880229888
 amidy antsinjarany: http://www.watchesonnet.com/patek-philippe-5208p-001.html?gclid=CjwKEAiAwZO0BRDvxs_1w-qFnhkSJABo10ggFsNRnSnQN1Bszh60eBaEh0z-RynDDeR_Gb_Wv7kxShoC2Vnw_wcB
 Fanekem-pinoana Niseana-Konstantinopolitana: http://www.antiochian.org/674
 fitafy mirentirety: http://www.ebay.com/itm/Russian-souvenir-baseball-cap-Adjustable-and-Black-Baklanovsky-cross-/151646571924